Badajoz ၏လှပသောမြို့များ- Olivenza မှ Alburquerque | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 07/05/2022 16:00 | Espana, လမ်းပြ
အများကြီးရှိပါတယ် Badajoz ၏လှပသောရွာများ ငါတို့မင်းကိုတင်ပြမယ့်သူတွေကို ရွေးရခက်နေလို့။ Extremadura ပြည်နယ်သည် ၎င်းတို့၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ကျောက်မျက်ရတနာများနှင့် အခွင့်ထူးခံ ရှုခင်းများအတွက် ထင်ရှားသည့် မြို့များနှင့် ပြည့်နေသည်။
နောက်တစ်ခုကတော့ မြစ်တွေရဲ့ မြေသြဇာကောင်းတဲ့ လွင်ပြင်တွေက ထင်ရှားပါတယ်။ ဂွါဒီယာနာ နှင့် ၎င်း၏လက်တက်များ၊ ဂွာဒါလူပီဂျိုဒါပေမယ့်လည်း လွင်ပြင်နဲ့ တောင်တွေလိုပါပဲ။ San Pedro ၏၎င်းတို့နှင့် နီးစပ်သော်လည်း Montes de Toledo နှင့် သက်ဆိုင်သေးသည်။ ပေါ်တူဂီ. ၎င်း၏အထိမ်းအမှတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ Badajoz သည် စပိန်နိုင်ငံအားလုံးတွင် သမိုင်းအရှိဆုံးပြည်နယ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခင်က Vetton နယ်မြေ၊ နောက်ပိုင်းအပိုင်း Lusitania ရောမသည် နောက်ပိုင်းတွင် မွတ်စ်လင်မ်ပိုင်နက်အတွင်းသို့ ပေါင်းစည်းကာ နောက်ဆုံးတွင် ဒေသတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ ကာ့စ်တီ တွင် ကျွဲရိုင်းဖြတ်ခြင်း။ 1371 ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ အချို့သောပိုက်လိုင်းများတွင် မလွဲမသွေချန်ထားခဲ့ကာ Badajoz ၏လှပသောမြို့များကို သင့်အားပြသမည်ဖြစ်သည်။
1 Olivenza၊ ပေါ်တူဂီမြို့ဟောင်း
2 Zafra၊ Badajoz မြို့
3 Badajoz ရဲ့ အကောင်းဆုံးမြို့တွေထဲကတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ Llerena
4 မျှော်စင်ငါးလုံး၏မြို့ Jerez de los Caballeros
5 Sierra ၏ Fregenal
Olivenza ရှိ လမ်းတစ်ခု
၁၈၀၁ ခုနှစ်မှစပြီး ပေါ်တူဂီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော စပိန်နိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော ဤလှပသောမြို့လေးအကြောင်း ပြောပြရန် ပြည်နယ်၏အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးစဉ်ကို စတင်ပါမည်။
၎င်း၏ ကြီးမားသော သင်္ကေတမှာ အလယ်ခေတ် မြို့တော် သို့မဟုတ် ခံတပ် သို့မဟုတ် ဖြစ်သည်။ Olivenza ရဲတိုက်XNUMX ရာစုမှ ၎င်း၏မြို့ရိုးကြီးကို ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည့် Alconchel၊ de los Ángeles၊ de Gracia နှင့် San Sebastián ကဲ့သို့သော ၎င်း၏ရဲတိုက်များနှင့် ဂိတ်တံခါးများ၊ ပထမနှစ်ခုသည် မြို့ပတ်ရထားမျှော်စင်နှစ်ခုဖြင့် ဘောင်ခတ်ထားသည်။ အတွင်းပိုင်းကို သင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ Santa María del Castillo ၏ဘုရားကျောင်းJesse Tree ဖြင့် လှပသော ယဇ်ပလ္လင်တစ်ခု တည်ရှိသည်။
အလယ်ခေတ်နှောင်းပိုင်းအထိလည်း ပိုင်သည်။ ajuda တံတားဘုရင်က ဆောက်ခိုင်းတယ်။ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသား မန်နူရယ် ၁ Guadiana ကိုဖြတ်ဖို့။ ဆက်ခံစစ်ပွဲအတွင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး မည်သည့်အခါမျှ ပြန်လည်မွမ်းမံခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
Badajoz မြို့ရှိ ဘာသာရေး အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံများ အနေဖြင့်လည်း သွားရောက်လည်ပတ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ Santa Maria Magdalena ၏ဘုရားကျောင်းဘုရင်ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ၎င်းသည် ပေါ်တူဂီလူမျိုး ဂေါ့တစ်နှောင်းပိုင်းပုံစံဖြစ်သော Manueline ပုံစံကို တုံ့ပြန်သည်။ ထို့အတူ မြင်သင့်သည် ကရုဏာအိမ်တော်အဆိုပါ San Juan de Dios ၏သီလရှင် နှင့် Olivenza ၏အစွန်အဖျားတွင်ရှိပြီး၊ Valdecebadar ၏ Romanesque မတိုင်မီဘုရားကျောင်း. နောက်ဆုံးတွင်၊ ဆောက်လုပ်ရေးသည် XNUMX ရာစုအလယ်ပိုင်းမှစတင်ခဲ့သော bullring သို့သွား၍ အလယ်ခေတ်ပုံစံပုံစံဖြင့်၎င်း၏လမ်းများတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
Zafra၊ Badajoz မြို့
Zafra ရှိ Dukes of the Dukes of Feria နန်းတော်
လူဦးရေ တစ်သောင်းငါးထောင်ခန့်သာ ရှိသော်လည်း ဇာဖရာသည် ဘုရင်က ပေးအပ်သည့် မြို့ဘွဲ့ကို ရရှိထားသည်။ Alfonso XII. မူဆလင်များက တရားဝင် တည်ထောင်ထားသော်လည်း ၎င်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရောမအိမ်ကြီး အများအပြား ကျန်ရှိနေသေးသောကြောင့် ၎င်း၏ သမိုင်းကြောင်းမှာလည်း အလွန်ကျယ်ပြန့်ပါသည်။
သို့သော် အားလုံးထက်၊ ဤ Badajoz မြို့သည် ၎င်း၏ အထိမ်းအမှတ် အများအပြားအတွက် ထင်ရှားသည်။ သူမရဲ့ ထုံးစံအရှိဆုံးတွေထဲမှာ Plaza Grande နှင့် Plaza Chica. ပထမတစ်ခုသည် arcade အများစုဖြစ်ပြီး အချို့ arcade များသည် XNUMXth မှဖြစ်သော်လည်း XNUMX ရာစုမှစတင်သည်။ ခေါ်ဆိုမှုမှတဆင့် မုခ်ဦးသေးငယ်သော ယဇ်ပလ္လင်တစ်ခုကို သင်မြင်နိုင်သည့်နေရာ၊ ကျော်ကြားသော Plaza Chica နှင့် ဆက်သွယ်သည်။ Zafra Rod. ၎င်းသည် အရံအတားတွင်ရှိသော ကုန်သည်များသည် ၎င်းတို့၏ ဆောင်းပါးများကို တိုင်းတာရန် အသုံးပြုသည့် ကော်လံတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည် Extremadura မြို့တွင်လည်း အလွန်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ Seville လမ်း နှင့် ဇော်မွှားပန်းလမ်းကြားJerez နှင့် Cubo arches တို့အပြင် မြို့တော်ခန်းမသည် ၁၆ ရာစုမှ နန်းတော်ဟောင်းတစ်ခုတွင် တည်ရှိသည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆောက်လုပ်ရေးအမျိုးအစားအကြောင်းပြောပါက Zafra တွင်အကိုက်ညီဆုံးမှာအထင်ကြီးစရာဖြစ်သည်။ Feria မြို့စား၏နန်းတော်လက်ရှိ ခရီးသွား တည်းခိုခန်း။
Badajoz မြို့ရဲ့ ဘာသာရေး အဆောက်အဦတွေအတွက်ကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။ Candelaria နှင့် Rosario ဘုရားကျောင်းများ၁၆ ရာစုမှ နှစ်ဦးစလုံးအပြင် Belén ၏သင်္ချိုင်းနှင့် Santa María del Valle ၏သီလရှင်ဖြစ်သည်။
Badajoz ရဲ့ အကောင်းဆုံးမြို့တွေထဲကတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ Llerena
Llerena ရှိ စပိန်ပလာဇာ
မြို့ဟောင်းတစ်ခုသည် သမိုင်းဝင်အနုပညာနေရာတစ်ခုအဖြစ် ကြေညာခြင်းနှင့်အတူ Llerena သည်လည်း Badajoz ၏လှပသောမြို့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အာရုံကြောဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ စပိန်ရင်ပြင်, သင်အံ့မခန်းတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ Lady of Granada ဘုရားကျောင်းလသာဆောင်များဖြင့် ခံ့ညားထည်ဝါသော အထပ်နှစ်ထပ်နှင့်၊ မြို့တော်ခန်းမသည် ထိုနေရာတွင် တည်ရှိပြီး ပန်းချီဆရာမှ ရေးဆွဲထားသော စမ်းရေတွင်းနှင့်လည်း နီးပါသည်။ Francisco de Zurbaran.
ထိုနည်းတူ၊ Badajoz မြို့၌၎င်းကိုမြင်ရမည်။ နံရံ ဆယ့်သုံးရာစုနှင့် Zapata နန်းတော်Inquisition တရားရုံးဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး အံ့မခန်း Mudejar ဟင်းလင်းပြင်ပါရှိသည်။ ဘာသာရေး ဗိသုကာပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း လာလည်ဖို့ သေချာပါတယ်။ Santa Clara ၏သီလရှင်ကျောင်း၎င်း၏ဗိမာန်တော်တွင် ခန့်ညားထည်ဝါသော ယဇ်ပလ္လင်များနှင့် Saint Jerome ၏လက်ရာ၊ Juan Martinez Montanes. နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဆန်တီယာဂိုဘုရားကျောင်းနဲ့ ခရစ်ယာန်နန်းတော်ကိုလည်း သွားပါ။
မျှော်စင်ငါးလုံး၏မြို့ Jerez de los Caballeros
Jerez de los Caballeros ရှိ Arco de Burgos၊ Badajoz ၏လှပသောရွာများကြားတွင်ထူးခြားသည်
Badajoz ၏လှပသောမြို့များကြားတွင်နောက်ထပ်အံ့သြစရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Jerez က de los Caballerosအဘယ်သူ၏အဓိကသင်္ကေတဖြစ်ပါသည် Templar ရဲတိုက်XNUMX ရာစုတွင် အာရပ်မြို့ဟောင်း၏ အကြွင်းအကျန်များဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Burgos နှင့် Villa တွင် တံခါးနှစ်ပေါက် ကျန်ရှိနေသော တံတိုင်းတစ်ခုဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။
ယေရက်ဇ်သည် ဤအရေအတွက်ဖြင့် မျှော်စင်ငါးခုရှိသည့်မြို့ဟု လူသိများသည်။ Baroque စတိုင်. အဲဒီအထဲမှာ ပါပါတယ်။ Santa María de la Encarnación၊ San Miguel Arcángel နှင့် San Bartolomé တို့၏ ဘုရားကျောင်းများSeville ရှိ Giralda နှင့် စတိုင်လ်ကျကျ ဆက်စပ်နေသည်။
အလားတူ Extremadura မြို့တွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် Convent အဆောက်အဦများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စိန့်သြဂတ်စတင်း၊ လူ့ဇာတိခံယူသော ကျွန်ုပ်တို့၏မိန်းမတော်နှင့် ဘုရားသခင်၏မယ်တော်ဖြစ်သည်။ San Lázaro၊ Cristo de la Vera သို့မဟုတ် Los Santos Mártires ကဲ့သို့သော လှပသော ဘုရားကျောင်းများစွာဖြင့် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သွားကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ Núñez de Balboa အိမ်ပြတိုက်ဒီနာမည်ကြီး အောင်နိုင်သူ မွေးဖွားရာ။
Sierra ၏ Fregenal
Fregenal de la Sierra တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လမ်းလျှောက်
အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ယခင်မြို့နှင့် အတိအကျ ကပ်လျက်။ ၎င်းသည် တောင်ခြေရှိ ၎င်း၏တည်နေရာအတွက် သင့်အားပြသထားသော Badajoz ၏လှပသောကျေးရွာများထဲမှတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ Sierra Morena နှင့် ၎င်း၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အမွေအနှစ်များအတွက် ဒီလိုပဲ၊ Templar ရဲတိုက် ၁၃ ရာစုမှ စတင်၍ ရှေးခေတ် ရောမ နှင့် Visigoth တို့၏ အကြွင်းအကျန်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းသည် အစောပိုင်းတစ်ခု၏ထိပ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟု ညွှန်ပြသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ ၎င်း၏အရံအတားတွင် XNUMX ရာစုမှစတင်ခဲ့သည့် bullring ဖြစ်သည်။ ရဲတိုက်နှင့် တွဲလျက်၊ Santa Maria ၏ဘုရားကျောင်းXVIII ၏ ပိုကြီးသော ယဇ်ပလ္လင်တစ်ခု ပါရှိသော်လည်း XIII တွင် ရက်စွဲပါရှိသည်။ ဘုရားကျောင်းများနှင့် ပတ်သက်၍၊ Santa Catalina Mártir၊ Santa María de la Plaza နှင့် Santa Ana တို့အပြင် မကြာသေးမီက ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိ ဘုရားကျောင်းများနှင့် San Ildefonso de la Compañía de Jesús တို့၏ ဘုရားကျောင်းများသို့လည်း သွားရောက်လည်ပတ်ရန် သင့်အား အကြံပြုအပ်ပါသည်။
သို့သော် သမိုင်းဝင်အနုပညာဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးသည့် Fregenal de la Sierra ၏ ကြီးမြတ်သော စံနှုန်းတန်ဖိုးမှာ ၎င်း၏ manor အိမ်များ။ သူတို့တွင်ထင်ရှားပါစေ Penches ၏စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော Neo-Mudejar ဟင်းလင်းပြင်နှင့်အတူ၊ သို့သော် Counts of Torrepilares၊ XNUMX ရာစုမှ Marquises of Riocabado၊ XNUMXth နှင့် Marchioness of Ferrera တို့၏ဘုံဗိမာန်များသည်လည်း အလွန်လှပပါသည်။
နောက်ဆုံး၊ Fontanilla ရေပန်း ၎င်းသည် XNUMX ရာစုမှစတင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏အလယ်ဗဟိုတွင် Virgen de la Guía ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည့်နေရာတစ်ခုရှိပြီး María Miguel ၏ဒဏ္ဍာရီတွင် Romeo နှင့် Juliet စတိုင်ချစ်သူနှစ်ဦးအကြောင်း ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုရှိသည်။
Albuquerque ရှိ San Francisco ဘုရားကျောင်း
Badajoz ပြည်နယ်၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ၎င်း၏အမည်မှာ လက်တင်ဘာသာစကားမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ albus quercusဆိုလိုသည်မှာ ဝက်သစ်ချဖြူပင် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ထိုဒေသရှိ သစ်ပင်အမျိုးအစား အများအပြား အထူးသဖြင့် ဖော့ပိတ်ပင် ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အမှန်မှာ၊ Albuquerque သည် ရှေးပဝေသဏီကတည်းက မှီတင်းနေထိုင်ခဲ့သည်၊ San Blas ၏ ဂူပန်းချီများကြေးခေတ်မှ ချိန်းတွေ့သည်။ ဒါပေမယ့် Badajoz မြို့ရဲ့ တံဆိပ်ကတော့ လရဲတိုက်အလယ်ခေတ်နှောင်းပိုင်းတွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၎င်းကို တောင်ကုန်းတစ်ခုမှ လွှမ်းမိုးထားသည်။ ဒါပေမယ့် သူက အဲဒီဒေသမှာ တစ်ယောက်တည်းတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဆယ့်နှစ်ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတယ်။ Azagala ရဲတိုက်La Peña del Águila ရေကာတာဘေး၊
၎င်းသည် Albuquerque ၏ အလယ်ခေတ်အတိတ်၏ သက်သေတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ခိုင်ခံ့သောဝင်းနာရီ သို့မဟုတ် Cabera ကဲ့သို့သော တာဝါတိုင်များနှင့် ၎င်း၏ Gothic ရပ်ကွက်၊ Villa Inside အနုပညာသမိုင်းဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုအဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်, the Santa Maria del Mercado ၏ဘုရားကျောင်း ၎င်းကို XNUMXth နှင့် XNUMX ရာစုကြားတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး XNUMXth တွင်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ အတွင်းတွင်၊ Cristo del Amparo ၏ တန်ဖိုးကြီးသော ထွင်းထုထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။
Albuquerque မှာ သင်သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဘုရားကျောင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ San Mateo ၏ဘုရားကျောင်းသည် Renaissance ဖြစ်ပြီး ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော Churrigueresque ယဇ်ပလ္လင်ပါရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော် Carrión ၏ဘေးမဲ့တောနှင့် Nuestra Señora de la Soledad ၏သင်္ချိုင်းသည် Baroque ပုံစံဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ Santa María del Castillo သည် Romanesque နှောင်းပိုင်းဘုရားကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူခရီးအချို့ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ကြပြီ။ Badajoz ၏လှပသောရွာများ. ဒါပေမယ့် အစမှာပြောခဲ့သလိုပဲ Extremadura ပြည်နယ်မှာ တခြားသူတွေ အများကြီးကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ, Burguillos del Cerroယဉ်ကျေးမှု စိတ်ဝင်စားသော နေရာအဖြစ် ကြေညာခြင်း၊ ပြသ၁၆ ရာစု ရဲတိုက်ကြီးနှင့်အတူ၊ Azagaပြည်နယ်တစ်ခုလုံးတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သည့် Nuestra Señora de la Consolación ဘုရားကျောင်းနှင့်၊ Fresno RiversideVargas-Zúñiga ရှိ ၎င်း၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အိမ်နှင့်၊ ဤအံ့ဖွယ်အမှုအားလုံးကို သင်သွားရောက်လည်ပတ်လိုသည်ဟု မခံစားရဘူးလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » Badajoz ၏လှပသောမြို့များ